प्रदेश सभामा एमाले भन्दा बढी माओवादीलाई मत - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २६ मंसिर २०७४, मंगलवार १४:१९
विराटनगर, २६ मंसिर । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रदेशसभा तर्फको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको माओवादी केन्द्रलाई वढी मत आएको छ ।
माओवादीलाई एमालेको भन्दा ९ हजार ३ सय ७५ मत वढी आएको छ । प्रतिनिधिसभा तर्फ नेकपा एमालेको १ लाख ४७ हजार ८ सय ९२ मत छ भने माओवादीको ५६ हजार ४ सय ७४ मत रहेको छ । ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थियो । एमालेका ३ र माओवादीका दुवै उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
तर प्रदेश सभामा एमाले र माओवादीले ६/६ वटा सिट बाँडेर चुनाव लडेका थिए । प्रदेश सभामा एमालेको ९३ हजार १ सय ९ र माओवादीको १ लाख २ हजार ४ सय ८४ मत आएको छ । प्रदेश सभामा माओवादीले २ र एमालेका ५ उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
वढी मत ल्याएर पराजित हुनेमा शर्मा र आचार्य
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वढी मत ल्याएर पराजित हुनेमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा तर्फ क्षेत्र नम्वर ३ मा नेपाली काँग्रेसका सुनिलकुमार शर्मा रहेका छन् ।
उनले ४० हजार ५ सय ६ मत ल्याएका थिए । उनलाई १ हजार ९ सय ७ मत अन्तरले एमालेका भानुभक्त ढकालले पराजित गरेका थिए । मोरङमा विजयी हुने अन्य ५ जना उम्मेदवारले ४० हजार पनि कटाएका छैनन् ।
यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्र नं ६ (क) मा उम्मेदवारी दिएका बाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य २१ हजार ४ सय ७० मत ल्याएर पराजित भए । उनलाई काँग्रेसका चुमनारायण तबदारले २ हजार ४३ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । प्रदेश सभाका १२ वटा सिट मध्ये ११ जना विजयी उम्मेदवारको २० हजार पनि कटेको छैन ।
क्षेत्र नम्वर ३ (ख) बाट एमालेका राजकुमार ओझाले २२ हजार ८ सय २० मत ल्याएका थिए ।
प्रतिनिधि भन्दा प्रदेशमा बदर मत कम
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको भन्दा प्रदेशसभा तर्फ मत बदर कम भएको छ । प्रतिनिधि सभामा ५ दशमलव ३० प्रतिशत मत बदर भएको छ ।
कुल खसेको ४ लाख ६५ हजार ३४ मत मध्ये २४ हजार ६ सय ४६ मत बदर भएको छ भने प्रदेशमा ४.५८ प्रतिशत मत बदर भएको छ । प्रदेशसभामा खसेको कूल मत ४ लाख ६४ हजार ३ सय ३६ मध्ये २० हजार ३ सय ६६ मत बदर भएको छ ।
cheap sildenafil, Zoloft reviews. प्रदेशसभामा बढी सदर मत
प्रतिनिधि सभामा भन्दा बढी प्रदेशसभामा मत सदर भएको छ । प्रतिनिधि सभामा ४ लाख ६५ हजार ३४ मत खसकेकोमा ४ लाख ४० हजार ३ सय ९० मत सदर भएको छ ।
प्रदेशसभामा ४ लाख ६४ हजार ३ सय ३६ मत खसेकोमा ४ लाख ४४ हजार मत सदर भएको छ ।
प्रतिनिधि भन्दा प्रदेशमा कम मत खस्यो
प्रतिनिधि सभामा ७२. १२ प्रतिशत मत खसेको छ । ६ लाख ४४ हजार ७ सय ८२ मतदाता मध्ये ४ लाख ६५ हजार ३४ ले मतदान गरेका थिए भने प्रदेश सभामा ७२.०१ प्रतिशत मत खसेको छ ।
कूल मतदाता मध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय ६६ ले प्रदेशसभाका लागि मतदान गरेका छन् । ६ सय ९८ जनले प्रदेश सभामा मतदान नै नगरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
बाम गठबन्धनको मत
प्रतिनिधि सभामा बाम गठबन्धनलाई २ लाख ४ हजार ३ सय ६६ मत खसेको छ । जुन कुल खसेको मतको ४३.९५ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रदेश सभामा १ लाख ९५ हजार ५ सय ९३ मत खसेको छ ।
कूल खसेको मतको ४२ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसको मत १ लाख ८६ हजार ९ सय ८० थियो भने प्रदेश सभामा १ लाख ८४ हजार १ सय ९ मत रहेको छ ।
उसको २ हजार ८ सय ७१ प्रदेश सभामा कम मत आएको छ ।
प्रमुख दलको मत प्रदेशमा घट्यो
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख तीन दलले प्राप्त गरेको मत प्रदेश सभामा घटेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीले ३ लाख ९१ हजार ३ सय ४६ मत ल्याएका छन् ।
जुन कूल खसेको मतको ८४ दशमलव १५ प्रतिशत हुन आउँछ । तर प्रमुख दलको मत प्रदेशसभमा घटेको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख तीन दलले ३ लाख ७९ हजार ७ सय २ मत प्राप्त गरेका छन् ।
जुन कूल प्रदेशमा खसेको मतको ८१ दशमलव ७७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
संघिय फोरमको मत वढ्यो, राजपाको घट्यो
संघिय समाजवादी फोरमले प्रतिनिधि सभाको भन्दा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत वढाएको छ ।
तर राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिनिधिसभाको भन्दा प्रदेश सभामा मत घटाएको छ । फोरमको प्रतिनिधि सभामा २८ हजार १ सय २ मत आएको छ भने प्रदेश सभामा ३६ हजार ८ सय २६ मत आएको छ । फोरमले प्रदेशसभा तर्फ क्षेत्र नम्वर ५ (ख) मा विजयी हाँसिल गरेको थियो ।
त्यहाबाट जयराम यादव विजयी भएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रतिनिधि सभामा ८ हजार ७ सय ६४ मत आएको छ भने प्रदेश सभामा ७ हजार ६ सय ५९ मत आएको छ ।
निर्वाचनमा सहभागि दल
प्रतिनिधि सभामा १८ राजनीतिक दल र ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए भने प्रदेश सभामा २२ वटा राजनीतिक दल र १२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका थिए ।biaxin